Into efana negazi ephuleni, ivela njalo. Abanye abantu, uma lesi sibonakaliso sibonakala, thuthukela emtholampilo ukuze uthole imbangela yayo bese uhlola impilo. Abanye abathinti ukubaluleka kokuphuma kwegazi emanzini. Ezimweni eziningi, lesi senzakalo sihlobene nokulimala nezifo ezivamile zomzimba. Ukuvusa ukuphuma ephuleni kungenzeka ngaphansi kwethonya lezici eziningi.
Indlela yokuphuma kwegazi
Ikhala liyisilwane esinokunikezwa kwegazi okuningi. Ngokuvamile, indawo engaphezulu kakhulu ye-membrane yamangqamuzana, indawo yaseKisselbach, ibonakele. Lokhu kungenxa yokuthi kukhona i-plexus ye-vascular lapho. Njengoba kunezingxabano ezincane emakhaleni noma emonakalweni we-mucosa ngenkathi kuphuma igazi, indawo yaseKisselbach ihlukumezekile. Ngokuvamile, ukuphuma okunjalo kungabalulekile kunomthamo futhi akusithathi isikhathi esiningi.
Okuyingozi kakhulu ukulimaza ama-plexuses ejulile emiphongeni, ngoba ahluke ngesikhathi futhi angena ezinhlobonhlobo eziseduze nasendaweni yokuphefumula. Ngaphezu kwalokho, uma kuphuma igazi elinjalo, ukulahlekelwa kwegazi okunzima kunokwenzeka, okuholela ekushusweni okukhulu kanye nengozi ekuphileni komuntu.
Indlela elandelayo yokuthuthukiswa ihlotshaniswa nokwenyuka kokuphakama kwodonga lwesitsha, ngenxa yokuthi i-erythrocytes ihamba ngokukhululekile ku-lumen. Ngenxa yalesi simo, asikho isidingo sokulimala ekhaleni. Ngokuvamile kuvame ukuvuvukala okukhulu noma ukuphulwa kwegazi ngokwayo.
Ungabangela kanjani igazi empeni?
Izimbangela zokuphuma kwamanzi yizici eziningi. Zihlukaniswe zibe yendawo kanye jikelele. Okokuqala kufaka phakathi lezo zimbangela ezihlobene ngokuqondile nesakhi esilungile. Ngokuvamile ukuphuma kwegazi kubangelwa ukuhlukunyezwa kuya ekhaleni, izikhathi ezincane - izinqubo zokuvuvukala ezenzweni. Ngobuthakathaka bezimpahla kungenzeka ngokuphindaphindiwe nokuqine ngamandla noma imizamo engaphumeleli yokuqeda ama-crusts. Lesi simo singabuye sibonwe ngendlela evamile, isibonelo, ngesikhathi sokukhulelwa.
Izimbangela ezivamile zihlanganisa izifo lapho ukuphuma kwamanzi kungenye yezimpawu. Kungaba izimo ezihlukahlukene ezihlotshaniswa nokuncipha kwamaplatelets, ukwephulwa kwamandla emithanjeni yegazi yomzimba. Isizathu esivame kakhulu umfutho wegazi ophezulu. Kungaba okuzenzakalelayo noma okuhlala njalo. Ungabangela kanjani igazi empeni bese ukwanda kwengcindezi yegazi? Ukushisa ngokweqile akuyona isifo njalo. Kungabangelwa ukwesaba, ukumangala, isimo esicindezelayo. Ngakho lezi zimo zingase zivusa ukuphuma kwegazi.
Indlela yokwenza igazi lihambe kusuka ekhaleni
Naphezu kokuthi ukuphuma kwamanzi kuyisimo sokugula, kwezinye izimo kungasiza. Umphumela omuhle kuwo ubonakala enkingeni yegazi ephakeme, esongela impilo yesiguli. Indlela enjalo ayikwazi ukusetshenziselwa uma kunezinye izindlela zokunikeza usizo. Ungabangela kanjani igazi emakhaleni ngokunyuka okungazelelwe kwengcindezi?
Kulokhu, ukhetho olulodwa kuphela olwenzekayo - ukushaya. Ngesikhathi esifanayo, akufanele kube namandla, ukuze kungalimazi i-plexuses ye-septum nejulile ye-plexuses. Ukweqa okuvela endaweni yaseKisselbach kuzosiza ukunciphisa ivolumu yokujikeleza igazi emzimbeni, okuholela ekunciphiseni kwengcindezi. Kuhlale kudingekile ukufuna usizo lwezokwelapha nokuqhubeka nokwelashwa kwesiguli ngezinye izindlela.
Izinto eziholela ekuphumeni kwamanzi
Ezigulini ezinesifo se-vascular pathologies, i-thrombocytopenia, i-hemophilia, i-sinusitis engapheli, ukuphuma ephuleni akukhona njalo, kodwa ngezikhathi ezithile. Ngokuvamile lesi simo senza izinto ezivusa amadlingozi. Ungabangela kanjani igazi empeni ngalezi zifo? Ngokujwayelekile isibonakaliso sandulelwe izinguquko emvelweni, isibonelo, kubanda, ukuguquka kwengcindezi yomoya (lapho ukhuphuka izintaba), umoya onamandla. Ngaphandle kwezimo zezulu, isici esicasulayo singabhemi ugwayi, iphunga elimnandi, imithi ethile.
Kulezidakamizwa ezingabangela i-nosebleeds, faka izidakamizwa ezenza ukunciphisa i-clotting ("i-Acetylsalicylic acid", "i-Warfarin", "i-Heparin") nezidakamizwa eziphikisayo. Ukusetshenziswa kwezidakamizwa zezokwelapha kungabangela nalesi sibonakaliso.
Izinkinga zokuphuma kwegazi
Isimo esinjengokuphuma kwegazi akuyona ingozi njalo futhi kungaholela ezinkingeni eziyingozi. Kwezinye izimo, kuyisibonakaliso sesifo esinzima ukuyihlolisisa (vasculitis, thrombocytopathy).
Yini engabangela igazi emiphumeleni yempumu? Ngomthamo walo omkhulu, ukucindezeleka okuyisifo esiningi kunazo zonke kuyisabisa kakhulu. Ngalesi simo, umuntu ulahlekelwa uketshezi oluningi, ukucindezeleka kwegazi kunciphisa kakhulu, yonke imisebenzi yomzimba ihlupheka. Uma isikhathi singabuyiselwa egazini legazi, ukushaqeka kungaholela ekufeni kwesiguli. Enye inkinga i-anemia - ukwehla kwe-hemoglobin, kuyilapho kuphazamisa ukulethwa kwe-oksijini ezithombeni nasezicukeni.
Kufanele kukhunjulwe ukuthi ukuphuma kwegazi kuyisibonakaliso kuphela, ngakho-ke kudingekile ukuba uxoxe nodokotela bese uthola imbangela yokubonakala kwakhe.
Amaphaphu Uphahla lwangaphakathi: ukukhweza ubuchwepheshe. Amathuluzi lokukhuphula kokufulela okwesikhashana
Indlela yokwenza imbuzi nezimpondo ngezandla zakhe aphume iphepha (isithombe)?
Spring ukuzingela amadada
GDP China. GDP lengenako. Umnotho China
Indlela ukubhaka isinkwa "Maynkraft": izigaba futhi Tricks
"Elincane": umthole oyoxoxa emfushane. "Elincane" Fonvizina: okuqukethwe